Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Voabaikon’ ny tsy miankina ny governemanta ?
INTY SY NDAY: Voabaikon’ ny tsy miankina ny governemanta ?
Nasiaka dia nasiaka, tsy toy ny olona manana andraikitra ambony ara-panjakana omaly atoandro Ingahy minisitra ny Fifandraisana Rahajason Harry Laurent, raha nivahiny tao amin’ny onjam-peon’ny Antsiva.
Maromaro ny raharaha nafampana tato ho ato ary nahavoatonontonona anaran’olona any an-dapa any. Iray amin’ireny i Mbola Rajaonah, dia tsy iza fa ilay mpanolotsaina manokan’ny filohampirenena Rajaonarimampianina.
Nibaribary tamin’iny fihazakazaky ny minisitra Rahajason Harry Laurent tao amin’ny radio Antsiva omaly atoandro iny fa misy fifamatorana manokana eo aminy sy i Mbola Rajaonah. Ny antony dia satria maro ihany ireo tompon’andraiki-panjakana ambony voatonona an-gazety saingy toa tsy nanosika an-dRahajason Harry Laurent hiteny, fa rehefa ny anaran’i Mbola Rajaonah no voatonona dia saro-piaro mafy Ingahy minisitra. Izay fifandraisany manokana any anefa, avelao ho azy any, fa ny raharaham-pirenena no ndeha hiaraha-mibanjina.
Nanaitra ny mpihaino omaly ny nandre ny filazan’Ingahy Minisitra hoe « teo ampivorian’ny filankevitry ny Governermanta mihitsy aho tamin’io 11 ora sy sasany atoandro io no nantsoinareo mpanao gazetin’ny Radio Antsiva, ka izao tsy maintsy tonga izao mitondra ny fanazavana amin’ireo raharaha somary naresaka tato ho ato ».
Ny fanamarihana voalohany aloha amin’izany dia hoe « angaha tokoa moa tsy mba azo nangatahana fotoana hafa ankoatra ny omaly ilay fitenenana tamin’ny onjam-peo hitondrana fanazavana momba irteo raharaha naresaka ireo sa efa isan’ny laha-dinika tao amin’ny Filankevitry ny governemanta ireo ka voairaka ho tsy maintsy mitondra fanazavana Ingahy Minisitra Rahajason, dia niantso ny Antsiva, fa tsy maintsy atao ny fanodinan-dresaka ? »
Etsy ankilany, toa midika koa izany, raha ny Radio Antsiva tokoa no niantso an’Ingahy Minisitra fa voabaikon’ny sehatra tsy miankina ny fitondram-panjakana, satria tsy tanàna may, tsy vohitra firehitra, nefa dia ao ampivorian’ny filankevitry ny governemanta ny minisitra iray no avy dia manaiky hivahiny ao amin’ny onjam-peo tsy miankina, hitondrana fanazavana momba ny raharaha maresaka sasantsasany.
Ny tena nifotoran’ny fanazavany aloha dia ny manodidina ilay resaka « eVisa » izay tsy inona fa ilkay fanomezana alalana ny vahiny hitsidika eto ka andoavana vola moa ireny fahazoana « Visa » ireny, saingy ny fepetra vao hampiharina amin’izao fotoana dia nahatafiditra ny anaran-dRajaonah Mbola. Ny raharaha iray faharoa tena nahamaika an-dRahajason ny nitondra fanazavana momba azy dia ilay resaka nambaran’ilay teratany Frantsay voalaza fa nitsoaka nandositra an’i madagasikara raha tokony hifonja teto. Tany ampita tany dia nilaza ho nanome vola 70.000 Euros ny mpitondra malagasy izy ho takalon’ny fahafahany nandositra.
Azo ambara koa anefa fa fototra ny resaka nataon-dRahajason Harry Laurent fotsiny ireo fa ny tena nataony maivana toy ny volom-borona tao dia ny mpanao gazety tsy manaiky hangina eo anoloan’ny tsy fahombiazan’ny fitondram-panjakana misy azy. Notononiny manokana mihitsy moa ilay « Hetsiky ho amin’ny fahalalahana maneho hevitra » (Mouvement pour la libérté de la Presse=Mle), izay ivondronana mpanao gazety maro. Ny mpitarika an’io « Mle » io izay vitsy, telo sisa, hoy ny minisitra Rahajason no milalao an’io anarana io hikaramana an’ady etsy sy eroa ka manimba ny asa fanaovan-gazety.
Dia nisy endri-pampihorohoroana avy hatrany moa nambarany hoe « hampiharina amin’izy ireo amin’izay ny lalàna momba ny fanalana baraka olona satria mba manana ny hasiny sy ny voninahiny ihany ny olona ambara matetika an-gazety ho nanao an’itsy na iroa nefa tsy marim-pototra ». I Mbola Rajaonah io. Dia manara-maso ny tohiny isika e !